युवा ज्योतिष हरिहर अधिकारीका पिताको को’रोनाको कारण नि’धन !
काठमाडौंँ : फिल्म ‘शुभलभ’ का नायक तथा युवा ज्योतिष हरिहर अधिकारीलाई पि’तृशो’क परेको छ । उनका पिता रामबहादुर अधिकारीको नि’धन भएको छ ।
उनका बुवा केही समय देखि संक्रमित थिए । अधिकारीको सोमवार नि’धन भएको हो । करिब तीन सातादेखि रो’गसँग सं’घर्षरत रामबहादुरको नेशनल अस्प’ताल क’लंकीमा उप’चारको क्रममा नि’धन भएको हो ।
कीर्तिपुर निवासी हरिहरको पुरै परिवार संक्र’मित भएका थिए । रामबहादुर पनि ज्योतिष विधामै सक्रिय थिए ।सिनेकर्मी माझ युवा ज्योतिष हरिहर अधिकारीको राम्रै प्र’भाव छ। थुप्रै नेपाली कलाकारले उनीसँग ज्यो’तिषिय सल्लाह लिने गर्छ। उनी आम ज्योतिष भन्दा फरक छन्।
झ’ट्ट् हेर्दा उनलाई एक आधुनिक युवाको स्वरूपमा देखिन्छ तर उनको पेसा ज्योतिषि हो। सिनेकर्मीसँग बाक्लै उठबस भएका हरिहर ज्योतिष पेसाबाट सिनेकर्ममा हो’मिएका हुन्।
उनी ‘शुभ लभ’ नामक सिनेमाबाट नायकका रूपमा पर्दामा डेब्यू गरेका थिए । त्यस्तै बरिष्ठ ज’र्नरल सर्जन डा. केपी सिंहको को’रोना संक्र’मणपछि उत्पन्न हुने ज’टिलताबाट नि’धन भएको छ। नेपाल चिकित्सक संघ जनकपुर शाखाका अध्यक्ष डा. राम नरेश पण्डितले नि’धन भएको पुष्टि गरे।
डा. सिंहलाई क’लेजको संक्र’मण भएको थियो। ७३ बर्षिय डा. सिंहको उप’चारको क्रममा जनकपुरको का’व्या ह’स्पिटलमा मृ’त्यु भएको हो। को’रोना संक्र’मित भएपछि डा. सिंह एक महिनादेखि घरमा आ’राम गरिरहेका थिए।
‘अस्ती उहाँको अ’चानक मुखबाट र’गत आयो। जनकपुरको काव्या हस्पिटलमा पुर्याउँदा ५ मिनेटमा नै निधन भयो,’ डा. पण्डितले भने। डा. सिंह जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालबाट
१० बर्ष अघि रि’टायर भएका थिए। उनी जनकपुरको एक प्राइभेट क्लिनकमा कार्यरत थिए। डा. सिंहको नि’धन प्रति नेपाल चिकित्सक संघले शो’क प्र’कट गर्दै दी’वंगत आ’त्माको ची’रशान्तीको का’मना गरेको छ।
२०७८ जेष्ठ ११, मंगलवार २३:०७ गते 1 Minute 881 Views
मन्त्री आलेद्वारा पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता रद्द !
मलेसियामा अनलाइन सट्टेबाजीमा डुब्दै नेपाली युवाहरु ।
मलेसियाले बिदेशी कामदारको तलब भुक्तानी गर्न इ-वेज प्रणाली लागु गर्दै !